Wararka - Marka la gaaro 2026, suuqa kala-soocidda hawada ee caalamiga ah wuxuu arki doonaa kobac la taaban karo
DBMR waxay ku dartay warbixin cusub oo lagu magacaabo "Suuqa Qalab Kala-duwanaanta Hawada", oo ka kooban jaantusyo xogeed sannadaha la saadaaliyay iyo taariikhda. Jadwalka xogtan waxaa matalaya "sheeko iyo garaafyo" oo ku faafay bogga oo si sahlan loo fahmo falanqaynta faahfaahsan. Warbixinta cilmi-baarista suuqa kala-soocidda hawada waxay bixisaa falanqayn muhiim ah oo ku saabsan xaaladaha suuqa ee soosaarayaasha qalabka kala-soocidda, oo ay ku jiraan cabbirka suuqa, koritaanka, saamiga, isbeddellada, iyo qaab-dhismeedka qiimaha warshadaha. Marka la aasaasayo suuqan caalamiga ah, waa inaan diirada saarno nooca suuqa, miisaanka ururka, helitaanka maxalliga ah, nooca ururka isticmaalaha, iyo helitaanka warbixinnada suuqa kala-soocidda hawada ee Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Yurub, Aasiya Baasifigga, iyo Bariga Dhexe. iyo Afrika. Kobaca suuqa qalabka kala soocida hawada waxaa inta badan horseeda kobaca kharashaadka R&D ee caalamiga ah, laakiin xaaladii ugu dambeysay ee COVID iyo hoos u dhaca dhaqaalaha ayaa bedelay dhaqdhaqaaqa suuqa oo dhameystiran.
Warbixinta cilmi-baarista suuqa kala-soocidda hawada ayaa macaamiisha siisa natiijooyinka ugu wanaagsan, waxaana warbixinta lagu soo saaraa iyadoo la adeegsanayo habab isku dhafan iyo tignoolajiyada ugu dambeeyay. Warbixinta suuqan, way fududahay in la aasaaso oo la wanaajiyo heer kasta oo ka mid ah habka warshadaha wareegga nolosha, oo ay ku jiraan ka qaybgalka, iibsiga, haysashada, iyo lacag ururinta. Warbixinta suuqu waxay samaysay falanqayn balaadhan oo ku saabsan qaab dhismeedka suuqa waxayna qiimayn ku samaysay qaybaha kala duwan ee suuqa iyo qaybaha hoose ee warshadaha. Ma aha in la xuso, jaantusyada qaar ayaa si wax ku ool ah loo adeegsaday warbixinta warshada kala soocida hawada si loo soo bandhigo xaqiiqooyinka iyo xogta habka saxda ah.
Ka mid ah tartamayaasha ugu muhiimsan ee hadda ka shaqeeya suuqa kala-soocidda hawada, waxaa jira dhowr Air Liquide (France), Linde (Ireland), Praxair Technology Co., Ltd. (UK), Alaabooyinka Hawada Co., Ltd. (USA), Messer Group Co., Ltd. (Jarmalka), Taiyo Nippon Sanso Corporation (Japan), Uig (USA), Enerflex Co., Ltd. (Canada), Technex, Astim (Yurub), Bd | Sensors GmbH (Jarmalka), Toro Equipment (Europe), Westech Engineering, Inc. (USA), Lenntech BV (Europe), Gulf Gases, Inc. (USA), Linde (Jarmalka), Qalabka & Supply, Inc. (Mareykanka). ), Biyaha Jbi iyo Wastewater (Mareykanka), H2Flow Equipment Inc (Canada), Haba Tuotteet (United States), Eco-Tech, Inc. (Mareykanka), Rcbc Global Inc (Jarmalka) iyo shirkado kale.
Suuqa qalabka kala-soocidda hawada ee caalamiga ah ayaa la filayaa inuu ka kordho qiimaha bilowga ah ee lagu qiyaasay $ 3.74 bilyan sanadka 2018 ilaa qiimo lagu qiyaasay USD 5.96 bilyan sanadka 2026, oo leh kobac sanadle ah oo kobac ah oo ah 6% inta lagu jiro xilliga saadaasha ee 2019-2026. Kor u kaca qiimaha suuqa waxaa loo aaneyn karaa baahida korodhka ah ee alaabada sawir-qaadista iyo kanaalada bandhigga balaasmaha.
Si aan inta badan u fahanno dhaq-dhaqaaqa suuqa qalabka kala-soocida hawada ee aduunka, waxaanu falanqeyn ku samaynay suuqa kala-soocida hawada ee gobolada waaweyn ee aduunka.
Faafida COVID-19 waxay carqalad ku abuurtay dhammaan dhuumaha warshadaha, kanaalada iibka iyo hawlaha silsiladda sahayda. Tani waxay saartay cadaadis miisaaniyadeed oo aan horay loo arag kharashaadka shirkadda ee hoggaamiyeyaasha warshadaha. Tani waxay kordhinaysaa baahida loo qabo falanqaynta fursadaha, aqoonta isbeddellada qiimaha iyo natiijooyinka tartanka. Isticmaal kooxda DBMR si aad u abuurto kanaalo iib oo cusub oo aad u qabsato suuqyo cusub oo aan hore loo aqoon. DBMR waxay ka caawisaa macaamiisheeda inay ku horumaraan suuqyadan aan la hubin.